सवारी चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उमेर हद फेरियो, अब कति उमेरकाले लिन पाउछन ? - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/सवारी चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उमेर हद फेरियो, अब कति उमेरकाले लिन पाउछन ?
माघ २७, काठमाडौं । सरकारले सवारी चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने उमेर हद बढाउने भएको छ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने उमेर हद १८ वर्ष कायम गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि १६ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
चालकका लागि कक्षा १० पास गरेको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक हमालले बताए। टुटल र पठाओलाई भने ऐनले समेट्ने वा नसमेट्ने भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको छैन। सकेसम्म टुटल पठाओलाई कानुनीरूपमा नै नियममा ल्याउने गरी मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ। सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अघि नबने पनि प्रदेशहरूले ऐन बनाइरहेका छन्।
प्रदेश १, प्रदेश २ र वाग्मती प्रदेशले सङ्घीय ऐनभन्दा पहिले नै नयाँ संविधानुसार ऐन बनाइसकेका छन्। बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावली बनाउने तयारी गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस